राकेश झुनझुनवालाका रोचक हर्कत : व्हीलचेयरमा कजरारे डान्सदेखि रक्सीमा हत्ते हाल्नेसम्म - Aarthiknews
एजेन्सी। भारतीय शेयर बजारका बादशाह राकेश झुनझुनवाला यतिबेला चर्चामा छन्। पहिलो कारण अक्टुबर ५ को एउटा तस्बिर हो, जसमा उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साथमा खुम्चिएको सर्ट लगाएर उभिएका छन्। दोस्रो कारण सरकारबाट अक्टोबर ११ मा उनीहरूको भर्खरै सुरु भएको एयरलाइन्सको लागी एनओसी प्राप्त गर्नु हो।
राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर बजार को 'बिग बुल' भनिन्छ। उनले सन् १९८५ मा मात्र ५ हजार रुपैयाँ बाट कारोबार सुरु गरे। फोर्ब्सका अनुसार हाल उनको नेटवर्थ ४४ हजार करोड भारु छ। उनको व्यक्तित्वको अर्को पाटो पनि छ। कहिले काहीँ उनी व्हील चेयरमा बसेर कजरारे कजरारेमा नाचिरहेका देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ उनी भन्छन्, 'म माछा जस्तै पिउँछु।' हेरौँ, उनको जीवनको यो अन्य पक्षलाई पाँच कुराबाट :
व्हीलचेयरमा कजरारे नृत्य
सामाजिक सञ्जालमा राकेश झुनझुनवालाको एउटा भिडियो छ। यसमा उनी व्हील चेयरमा बसेर कजरारे-कजरारे गीतमा नाचिरहेछन्। झुनझुनवाला मधुमेहबाट पीडित छन्, जसको कारण उनको खुट्टा सुन्निएको छ। उनी राम्ररी हिँड्न पनि सक्दैनन्, तर ह्वील चेयरमा उनको नृत्य 'बिग बुल'को जीवन्तताको प्रमाण हो।
यस भिडियो मा झुनझुनवाला उनकी पत्नी रेखा, घनिष्ठ मित्र उत्पल सेठ, अमित गोएला र परिवारका धेरै सदस्यहरुसंग देखिएका छन्।
बेफिक्री: अर्थमन्त्रीको अगाडि ठट्टा, प्रधानमन्त्रीको अगाडि खुम्चिएको सर्ट
राकेश झुनझुनवालाको व्यक्तित्वको अर्को विशेष विशेषता उनको लापरबाही हो। उनी औपचारिकतामा अल्झिन चाहँदैनन् । हालसालै उनका दुई तस्बिरहरू धेरै चर्चामा थिए। पहिलो तस्बिरमा उनी चप्पल लगाएर अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण पुगिन्। दोस्रो तस्बिरमा उनी प्रधानमन्त्री बिना प्रेसको सर्ट लगाएर देखिएका छन्।
उनलाई यस बारेमा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो। झुनझुनवालाले इंडिया टुडे कन्क्लेभमा मुस्कुराउनु भने, 'मैले मेरो सर्ट ६०० रुपैयाँ तिरेर आइरन गरें । यो पछि पनि त्यो खुम्चिएको छ, मैले के गर्नु पर्छ? म अफिस पनि हाफ पाइन्ट लगाएर जान्छु।'
यो अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको थियो कि पीएम मोदीसँग बैठकमा के भयो। झुनझुनवालाले लापरवाह जवाफ दिए र भने, 'हनिमुनमा मेरी श्रीमतीलाई के भयो। के यो सब भन्नु पर्ने कुरा हो ?'
सादगी: यदि हालको भन्दा १० प्रतिशत मात्र सम्पत्ति भए पनि उस्तै जीवन बाँच्न सक्छु
राकेश झुनझुनवालालाई एक साक्षात्कारमा सोधिएको थियो कि पछिल्लो १ महिनामा तपाइँको पोर्टफोलियो एक रकेट जस्तै बढेको छ। तपाइँको नेट वर्थ ४० हजार करोड पुग्यो। तपाइँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसमा झुनझुनवाला धेरै सजीलो जवाफ दिए, 'कसलाई गणना गर्ने, के नगर्ने। ब्यालेन्स पाना कसलाई देखाउनु पर्छ? हामीसँग एक साथी छ, उसको कुनै चासो छैन। यदि यसको १०-१५ प्रतिशत मात्र धन भए पनि जीवन हुनेछ। मैले एउटै ह्विस्की पिउँछु, उही कार प्रयोग गर्छु, एउटै घरमा बस्छु। यसैले म गणना गर्दिन। म यो काम गर्छु किनकि मलाई थाहा छ।'
राकेश झुनझुनवालाले आफ्नो कमाइको २५ प्रतिशत परोपकारमा दान गर्ने गरेका छन्।
पश्चात्ताप रक्सी र सिगारको बानी
सन् २०१० मा फाइनान्स एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा झुनझुनवालाले आफू मधुमेहको बिरामी भएको बताएका थिए। आफ्नो रक्सी र चुरोटको बानीको बारेमा कुरा गर्दै झुनझुनवालाले भनेका थिए कि उनले सावधानी अपनाउनु पर्छ।
झुनझुनवालाले भने, 'मैले महसुस गरें कि मैले कडा अनुशासन पालना गर्नु पर्छ। म मधुमेह रोगी हुँ र माछा जस्तै पिउँछु। म मेरा जुम्ल्याहा छोराहरु २५ वर्षको भएको हेर्न चाहन्छु।
इकोनोमिक टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा झुनझुनवालाले भने कि मलाई जीवनमा कुनै पश्चात्ताप छैन। मेरो मात्र चाहना थियो कि म मेरो व्यक्तिगत बानी सुधार्नु पर्छ र अधिक व्यायाम गर्नु पर्छ।
निडरता: श्रीमतीको छुरा बेच्न तयार
राकेश झुनझुनवाला जोखिम लिन कहिल्यै डराएनन्। प्रारम्भिक दिनहरुम, उनले आफ्नो भाइको ग्राहकबाट पैसा उधारो र ब्याज सहित फिर्ता गर्ने वाचा गरे।
झुनझुनवालाको पहिलो नाफा १९८६ मा भएको थियो जब उनले ४३ रुपैयाँको दरमा टाटा चियाका ५ हजार सेयर किनेका थिए। शेयर बजार बढ्यो र तीन महिना भित्र शेयर मूल्य रु १४३ पुग्यो। उनले तीन महिनामा तीन गुणा नाफा कमाए। त्यसयता उनको जोखिम लिने यात्रा जारी छ।
इकोनोमिक टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश झुनझुनवालाले भने, 'म बजार र महिलाहरूमा रुचि राख्छु। महिला माया र बजार जोखिमसँग हिँड्छन्। जोखिम लिनु मेरो बानी हो। जब बजार राम्रो अवसर दिन्छ, म मेरी श्रीमतीको चुरा बेचेर पनि लगानी गर्नको लागी तैयार छु।
५ हजार रुपैयाँबाट ४४ हजार करोड
राकेश झुनझुनवालाका बुबा आयकर अधिकारी थिए। १९८५ मा जब झुनझुनवाला कलेजमा थिए, उनले शेयर बजारमा लगानी गर्न थाले। त्यस बेला सेन्सेक्स १५० बिन्दुमा थियो र आज यो ६० हजार नाघेको छ।
झुनझुनवालाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होल्डिंग टाटाको घडी र गहना कम्पनी टाइटनमा छ। यसको साथमा झुनझुनवालाको स्टार हेल्थ इन्स्योरेन्स, मेट्रो ब्रान्ड र कनकॉर्ड बायोटेक लगायत अन्य धेरै कम्पनीहरूमा पनि हिस्सेदारी छ। झुनझुनवालाको स्पाइसजेट र जेट एयरवेजमा १-१ प्रतिशत हिस्सा छ।
सन् २००३ मा राकेश झुनझुनवालाले आफ्नै शेयर ट्रेडिंग फर्म रारे इन्टरप्राइजेज सुरु गरे। यो फर्म राकेश र उनकी श्रीमती रेखाको नाममा छ । आरएको अर्थ राकेश र आरईको अर्थ रेखा झुनझुनवाला हो। रेखा झुनझुनवाला शेयर बजार लगानीकर्ता पनि हुन्। दुवैले १९८९ मा बिहे गरेका थिए। श्रीमानको जस्तै रेखाको पनि धेरै कम्पनीहरूमा हिस्सेदारी छ। (भास्कर डटकमबाट)